Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Daniel Parejo Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ahụ Eke Ndụ
Ihe omuma anyi nke Daniel Parejo bu ihe omuma banyere akuko nwata ya, Nko mbido ya, ezinulo ya, ndi nne na nna, nwunye ya, umuaka ya, ndu ya, uru ya na ndu onwe onye.
Na nkenke, anyị na-agwa gị akụkọ ihe mere eme nke ndị ọkachamara na Spanish ọkachamara. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị nke Dani Parejo's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise nke ndụ ya.
Ndụ na ịrị elu nke Daniel Parejo.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu Midfield kachasị ama ama na Europe. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle mbipụta anyị nke Daniel Parejo's Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Daniel Parejo Storymụaka Akụkọ:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “Dani.”Daniel“ Dani ”Parejo Muñoz mụrụ na 16th ụbọchị Eprel 1989 na obodo Coslada na Spain. Ọ bụ otu n'ime ụmụaka abụọ amụrụ nye nne na nna ya a ma ama - Lorenzo Parejo.
Ndị nne na nna Daniel Parejo.
A zụlitere agbụrụ Spanish nke agbụrụ ọcha na agbụrụ ezinụlọ Europe na obodo amụrụ ya - Colada - na Spain ebe o toro n'akụkụ nwanne ya nwanyị hụrụ n'anya aha ya bụ Natalia Parejo.
Nacho Fernandez Child Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
N'ịbụ onye tolitere na Coslada, Parejo na-eto eto dị afọ 6 mgbe ọ malitere ịkụ bọl na-asọmpi n'ogige ntụrụndụ dị nso n'ụlọ ezinụlọ ya.
Ogige ahụ niile nwere aja ma nwee mbara ala dị ka okike. Ka o sina dị, nye Parejo na ndị ọgbọ ya, ọ dị ka igwu egwu na ahịhịa ndụ, ebe ụzọ abụọ ahọpụtara n'ogige ahụ bụ ihe mgbaru ọsọ ha.
N'ikwu nke a, ndị na-eto eto lere ogige ahụ anya ka ọ dị mma karịa igwu egwu n'okporo ámá ebe a na-abakarị ha mba maka imebi oriọna oriọna.
Foto nwata di na Daniel Parejo (nke mbu site n’aka ekpe) ka ya na ndi ogbo ya na egwurie egwu n’ogige ebe ha gbara bọọlụ.
Daniel Parejo Mmụta:
Ka ọ na-erule oge Parejo dị afọ 9, ọ sonyeere usoro agụmakwụkwọ ntorobịa nke ụlọ ọgbakọ ya bụ CD Coslada ebe ọ zụrụ azụ maka afọ 2 tupu ọ kwaga ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Espinilla n'afọ 2000.
Ọ bụ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke Espinilla ka Parejo nọrọ oge atọ mmụta na ịzụlite nka nke masịrị onye bụbu Real Madrid scout Sito.
N'ịbụ onye a maara maka ọdịdị ya nke ịhụ ezigbo atụmanya, Sito dị ngwa ịkwado ịkwaga Parejo na usoro ndị ntorobịa nke Real Madrid, mmepe nke mere ka nwa-afọ 14 dị afọ iri na ụma nwee ihe ịga nke ọma na ụwa ọhụrụ nke ohere.
Nwa nwoke 14 bụ Daniel Parejo kpọbatara Real Madrid site na scout nke hụrụ atụmanya na ya.
Daniel Parejo Biography - Ndụ Mmalite Ndụ:
Mgbe ọ nọ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Real Madrid, Parejo nwere ọganihu ngwa ngwa site na klọb na-egosipụta ogo teknụzụ na njikwa nke ọma bọọlụ n'ụzọ nke dọọrọ uche onye ọ bụla enweghị mmasị na football.
Ọbụna onye nkụzi mbụ Bernd Schuster na-akpọkarị ya ka ọ zụọ ndị okenye.
N'ihi nke a, Parejo hụrụ amara n'anya onye akụkọ bọọlụ Real Madrid bụ Alfredo Di Stefano bụ onye kwupụtara na nwata ahụ bụ onye ọkpụkpọ kachasị mma ọ hụtụrụla na usoro ndị ntorobịa nke Los Blancos.
Na Real Madrid, Daniel Parejo bụ ọkacha mmasị nke Alfredo Di Stefano onye na-eto ya mgbe niile maka ọrụ ngosi ya.
N'ezie, mgbe ndị dike Spanish kwenyeghi ma ziga Parejo na-eto eto na mbinye ego mbinye ego na Queens Park Rangers na 2008, Di Stéfano kwụsịrị ịga egwuregwu egwuregwu B (Castilla) na mkpesa.
Javi Martinez Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Real Madrid mechara cheta onye ọkpụkpọ ahụ site na mbinye ego ya na Jenụwarị 2009 wee mee ka ọ pụta ìhè n'egwuregwu egwuregwu mbụ ka ọ bụrụ onye na-anọchite anya ndị na-eme egwuregwu etiti.
Daniel Parejo Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Na July 2009, Parejo sonyeere Getafe CF ụlọ La Liga dị ka akụkụ nke mgbanwe mgbanwe nke ghọrọ mgbanwe na ọrụ ya.
E gosipụtara ya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu niile maka Getafe na oge 2009-10 ma nyere ụlọ ọrụ ahụ aka inweta UEFA Europa Njikọ ntozu nke ugboro abụọ na akụkọ ihe mere eme ha.
N'oge na-adịghị anya mgbe o kwusịrị na Getafe zeere mbupụ n'oge oge 2010-11, Parejo sonyeere Valencia CF wee rụọ ọrụ ka ọ bụrụ onye isi nke klọb.
O di nwute, o nwere nsogbu di iche iche n'inwe udiri ihe obula ma buru onye obula maka ihe obula nke mehiere na klọb n'oge oge 2015-16 di egwu.
N'elu ọnụ ọgụgụ Valencia, Parejo wepụrụ onye isi ya mgbe ahụ onye nchịkwa Gary Neville ebe ndị Fans na-enwewanye iwe na enweghị onye isi na-enweghị isi n'oge ahụ.
Ụmụaka Kepa Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Eziokwu
Daniel Parejo nwere nsogbu mgbe ụfọdụ site na enweghị nkwekọrịta na-efu ya ọtụtụ ihe.
Daniel Parejo Bio - Nbilite Na-ewu ewu Akụkọ nke:
Parejo mechara hụ mgbanwe nke uba mgbe onye isi njikwa Marcelino Garcia Toral lekọtara Valencia na 2017.
Ọ bụ Marcelino bụ onye weghachiri obi ike Parejo ka ọ wuru otu gburugburu Midfield wee weghachite onye isi ya furu efu.
Parejo kwụghachiri ntụkwasị obi site na ịdekọ mmepe niile ma na-ebute ụzọ nlọghachi nke Los Che n'elu.
Daniel Parejo laghachiri n'ụdị mmeri mgbe Marcelino lebara Valencia anya na 2017.
Ọganihu ngwa ngwa n'oge ederede, Parejo abụghị naanị otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ kachasị mma na Europe kama ọ bụ onye ọkpụkpọ nwere Ogologo Ogologo Ogologo Isi na Ntọala Piece.
Ọ bụ - dị ka ezigbo onye ndu - ọ dị mkpa maka otu ya na dịka mmanya dị mma, Parejo ka mma karịa afọ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Dani Carvajal Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Nwunye Daniel Parejo, Childrenmụaka:
N'azụ ihe nkiri nke ọrụ ịgba egwu Parejo, ọ nwere ọtụtụ ihe na-aga n'ihu n'ịhụnanya ya, anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara ndụ ịhụnanya nke onye na-egwu egwuregwu na-amalite site na mmekọrịta ya na enyi ya nwanyị mbụ - Aroa Martínez.
Amaghi ihe banyere otu ma obu mgbe mbu ndi lovebirds bidoro. Otú ọ dị, ha malitere ibikọ ọnụ mgbe onye na-egwu egwuregwu sonyeere Valencia na 2011.
Ha kwuru na ha dere maka afọ abụọ tupu ha agawa ụzọ dị iche iche n'ihi esemokwu na-enweghị atụ.
Daniel Parejo nwere mmekọrịta ịhụnanya na enyi ya nwanyị bụbu Aroa Martínez n'oge ọ bụ nwata na Valencia.
N'ịga n'ihu, Parejo zutere ma malite ịlụ Isabel Botello bụ onye mechara bụrụ nwunye ya. N'ịbụ onye na-abụghị nwunye, Isabel bụ onye mmeri nke ọdịmma Parejo ka ọ na-agakarị na mgbasa ozi ọha na eze ịkatọ ndị agbụrụ mgbe ọ bụla ha kwuru okwu ọjọọ banyere ya.
Di na nwunye di na nwunye nwere umuaka abuo n'oge edere. Ha gụnyere nwa nwoke Dani Jr ebe amachaghị banyere nwa ọdụdụ nwa a mụrụ na 2018.
Daniel Parejo ya na nwunye ya na umuaka ya abua.
Ndụ ezinụlọ Daniel Parejo:
Daniel Parejo buru ibu na ezi na ụlọ, anyị ewetara gị eziokwu gbasara ndị otu egwuregwu bọọlụ bidoro site na nne na nna ya yana kọwaa eziokwu banyere agbụrụ ọmụmụ ya.
Banyere nna na nne Daniel Parejo:
Dani nwere obere nne na nna a maara dị ka Lorenzo Parejo. Mama Parejo - onye amabeghị agbụrụ ya - na-ahụ mgbe niile na ọ naghị eleghara egwuregwu ya anya.
N'aka nke ọzọ, papa onye na-egwu egwuregwu - onye sitere na mgbọrọgwụ Spanish - anaghị ahapụ ịkọ ya maka ịdị ukwuu.
N'ozuzu ya, Parejo kwupụtara na ndị mụrụ ya nwere nnukwu nkwado nye ya kemgbe ọ malitere nzọụkwụ mbụ ya na football na ogige na n'okporo ámá nke Coslada.
Banyere ụmụnne Daniel Parejo:
Parejo enweghị nwanne ma ọ bụ nwanne mana nwanne nwanyị aha ya bụ Natalia Parejo. Dị ka ndị ọzọ so n'ezinụlọ Parejo, Natalia bụ onye na-ekiri egwuregwu mgbe nile ebe nwanne ya nwoke na-azụ ahịa ya.
Ọ na-aga n'ekwughị na ụmụnne ahụ abụwo ezigbo ndị enyi site na nwata ruo n'oge.
Daniel Parejo ya na nne na nna ya na nwanne ya nwanyi Natalia (2nd site n'aka ekpe).
Banyere ndị ikwu Daniel Parejo: Ewezuga ezi ezinụlọ nke Parejo, amachaghị banyere nne na nna ya ochie yana nna nna ya na nne nne ya.
N'otu aka ahụ, enweghị ndekọ banyere nwanne nna nna ya, nwanne nna ya na nwanne nne ya na nwanne nna ya mgbe a ka ga-eme ka ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya mara n'oge edere akụkọ ndụ a.
Daniel Parejo Ndụ Nke Onwe:
You maara na Daniel Parejo na-egosipụta àgwà mmadụ nke gụnyere ilitydị umeala n'obi, ilekwasị anya na ọgụgụ isi nke uche? Tụkwasị na nke Parejo bụ onyinye ya nke nnabata na ikike maka idu ndú.
Onye na-egwu egwuregwu bọọlụ nke onye Aries Zodiac na-eduga na-ekpughere nkọwa gbasara ndụ ya na ndụ ya ebe ọdịmma ya na ntụrụndụ gụnyere ime njem, ile ihe nkiri, igwu egwuregwu vidio na iwepụta oge dị mma n'etiti ndị enyi na ezinụlọ.
Daniel Parejo na ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya nọrịa.
Daniel Parejo Web site Ndụ:
Na-ekwu okwu banyere Dani Parejo na-eme ma na-emefu ego ya, ngụkọta nke uru ya na-anata ụgwọ site na ụgwọ ọ na-enweta maka egwuregwu bọọlụ nọ n'isi elu ebe ndị ọzọ mejupụtara akụ na ụba ya na-enweta site n'aka ịkwado ụdị dịka Adidas.
Ọ bụ ezie na a na-enyocha usoro eji emefu Parejo n'ị nweta akụ dịka ụgbọala na ụlọ ka ana-enyocha ya, ọ na-eti ndị egwu egwu dị ka onye na-ebi ndụ okomoko dịka nke pụtara ìhè na oge ezumike ọ na-ewe ya na ezinụlọ ya.
Daniel Parejo ya na nwunye ya na ụmụ ya na-anọ ezumike nnukwu.
Daniel Parejo Eziokwu efu:
Iji chikọta akụkọ nwata anyị na Pairejo na akụkọ ndụ anyị, anyị na-ewetara akụkọ ndị a na-akọwaghị ma ọ bụ ndị amachaghị bụ ndị na-etinyeghị ọnụ na akụkọ ndụ ya.
Smụ sịga na Mmanya: Enyereghị Parejo ị takingụ ihe ọ hardụ hardụ siri ike, ahụbeghịkwa ya ka ọ na-a smokingụ sịga n'oge edere.
Site n'inwe ezi ahụike dị otú a, onye na-egwu egwuregwu na-esonye n'egwuregwu ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ bụ ndị ji ahụ ike ha kpọrọ ihe na-agaghị eme ihe ọ bụla iji mebie ya.
Ogbugbu: Daniel Parejo nwere naanị egbugbu ma ọ bụ nka na aka nri ya. Ọnwụ ahụ a na-adọta na mkpụrụedemede Arabị bụ ihe omimi dị egwu nye ọtụtụ ndị na-aghọtaghị na ọ bụ nsụgharị Arabic nke aha onye na-egwu egwuregwu.
Aha Daniel Parejo na egbugbu na ogwe aka ya na ederede Arabic.
Religion: Magba egwu etiti adịghị nnukwu ibu na okpukpe ma enyebeghị nkọwa nke doro anya nkwenkwe ya. N'ihi ya, enweghị ike ikwupụta ya n'ụzọ edere ma ọ bụ onye Kraịst, onye Alakụba ma ọ bụ onye ekweghị na Chineke.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Daniel Parejo Childhood Plus Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.